December | 2013 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on December 31, 2013 by chitnge
ပရဟိတလုပ်တာဘဝင်မြင့်ဖို့မဟုတ်ပါ ပရဟိတလုပ်ကြတာ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကလည်း တစ်ခါမှ ကန့်ကွက်တဲ့သဘော မပြောဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရဟိတ လုပ်တာဟာ ဘ၀င်မြင့်ဖို့ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာတော့ စပြောလာပြီ။ ပရဟိတ လုပ်ပြီးတဲ့နောက် မေတ္တာစေတနာနဲ့ လုပ်တာပဲ ကောင်းတာလုပ်တာပဲ ဒါပဲပေါ့။ အခုတော့ ပရဟိတ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့ လက်မထောင်လာတယ်၊ ဘ၀င်မြင့်လာတယ်၊ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ မောက်မာချင်လာတယ်၊ စော်ကားချင်လာတယ် ဆိုတော့ ဒါကတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ။ ပရဟိတလုပ်ပြီး မောက်မာတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ လုပ်တာဟာ အနုတ်လက္ခဏာတွေ ပြန်ပါသွားတဲ့ … Continue reading →
သစ္စာတရားကိုပူဇော်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှသာ — သစ္စာသည် လွန်စွာထက်မြက်သည်။ လေ့လာလိုက်စား တန်ဖိုးထား ပူဇော် ကျင့်ကြံအားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာ ရေရေလည်လည် သိရှိနိုင်သည်။ အပရိက ကြည့်ရှုရုံနှင့် မသိနိုင်ချေ။ အချို့က ပရဟိတတော့ လုပ်ပါသည်။ သို့သော် ပရဟိတ လုပ်ရင်းနှင့် ဘ၀င်မြင့်လာကာ သစ္စာတရား ကျင့်ကြံ အားထုတ်နေသူများအား ပုတ်ခတ်ချင်လာသည်။ ဤကဲ့သို့ လမ်းမှားများကို ပြောဆို ပြုမူလာလျှင် မိမိ၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် ဆန္ဒပါရမီများ ရေထဲ ပလုံကနဲ ပြုတ်ကျသွားနိုင်သည်။ သစ္စာသည် လွန်စွာထက်မြက်သည်။ သစ္စာကို … Continue reading →
Posted on December 28, 2013 by chitnge
ဆရာ၏ အသစ်ထွက်ရှိလာသော စာအုပ် Admin/www.chitnge.com No tags for this post.
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု 06
Posted on December 24, 2013 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု အပိုင်း(၆) “နိုင်ရင်လည်း မကြွားပါနဲ့” ပြိုင်ပွဲတော့ အမျိုးမျိုးရှိတာပါပဲ။ နိုင်တဲ့လူက နိုင်တာပဲ။ ရှုံးတဲ့သူကလည်း ရှုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်တိုင်း ကျောတာတော့ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လက်မခံပါဘူး။ နိုင်ရင်ကျောဖို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ နိုင်အောင်ကြိုးစားတာအထိတော့ လေးစားပါတယ်။ ကမ္ဘာကတော့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နည်းပညာရေး ရေးအမျိုးမျိုးက နိုင်နေတာ မြန်မာကို နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကျောပါနဲ့။ မြန်မာလည်း ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ အားမာန်တော့ ရှိတာပေါ့။ ရေရှည် ရေတိုပဲ ကွာတာပါ။ … Continue reading →
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သောဘ၀တစ်ခု 05
Posted on December 22, 2013 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သောဘ၀တစ်ခု အပိုင်း(၅) ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လမ်းနှစ်သွယ်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်လမ်းကတော့ လောကီပေါ့နော် (၃၁) ဘုံထဲ ကျင်လည်ဖို့ပါပဲ။ ရှုပ်ထွေးတာပေါ့။ ပူလောင်မှုလည်း အထိုက်အလျှောက်တော့ ရှိတာပေါ့။ သဘာဝ အတိုင်းပါပဲ။ လောကုတ္တရာကတော့ အေးငြိမ်းတာပေါ့လေ။ ရှင်းသန့်တာပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အေးငြိမ်းချမ်းသာသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဆိုအဆုံးမထဲမှာကိုက “ပစ္စတံ ဝေဒိတဗ္ဗော ၀ိညူဟိ” ဆိုတာ အရိယာဉာဏ်ပညာတွေ ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ သတင်းသုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါက … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု 04
Posted on December 21, 2013 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု အပိုင်း(၄) မြန်မာတွေကို ပိုမတွက်ချင်နေပါ လျှော့မတွက်ပါနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတော်မှာ မြန်မာတွေဟာ တော်တဲ့နေရာ တော်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အချို့ကြောင့် အချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ သူ့ရှု့ထောင့် ကိုယ့်ရှု့ထောင့် တင်ပြစရာများ ရှိသော်လည်း မြန်မာတွေကို လျှော့တွက်လို့မရကြောင်း သက်သေပြစရာ အထောက်အထားများကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ မြန်မာတွေဟာ တော်တဲ့အပိုင်းတွေ တော်တယ်ဆိုတာ ကတော့ သိသာပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကမ္ဘာက လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ အရမ်းရှေ့ရောက်တယ်။ နည်းပညာဖြစ်စေ၊ … Continue reading →
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု
Posted on December 20, 2013 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု အပိုင်း(၃) ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာတွေက ရိုးသားတယ်။ ရိုးသားတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ‘အ’ တာကိုတော့ မထောက်ခံဘူး။ မြန်မာတွေက တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ‘အ’ တယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တော့ ခံယူမိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာပဲ၊ ကျွန်တော်လည်း တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ‘အ’ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အသက်ရလာတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော် မအ ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ရိုးသားဖို့လည်း ကြိုးစားတယ်၊ မအ ဖို့လည်း ကြိုးစားတယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်	| Leaveacomment
မြန်မာပြည်ထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု 02
မြန်မာပြည်ထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု အပိုင်း(၂) မြန်မာပြည်ထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခုဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ဆိုလိုခြင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဘ၀တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် လောကီစီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာ စတဲ့ရေးအမျိုးမျိုးတွေဟာ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်ပါတယ်။ အောင်တော့ အောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရှိပါတယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အောင်မြင်နေကြတာပဲ။ စာရေးသူကတော့ တရားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ တရားတွေ့တာနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts	| Comments Off on မြန်မာပြည်ထဲက အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု 02
Hawking and God Particle
Posted on December 14, 2013 by chitnge
Hawking and God Particle Stephen shouldn’t say that Physics has become boring when “God Particle” had been discovered. God Particle has been discovered. That’s it. That’s why the founder was awarded the Noble Prize. The discovery of God Particle doesn’t … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Stephen Hawking	| Leaveacomment
စတီဖင်ဟော့ကင်းကို လေ့လာခြင်း စတီဖင်ဟော့ကင်းသည် ဤခေတ်၌ အိုင်းစတိုင်းနေရာ ယူသည်ဟု အဆိုပြုကြသည်။ (A Brief History of Time) စာအုပ်ဖြင့် အထူး နာမည်ကျော် ရေပန်းစားခဲ့သည်။ (Origin of Universe) ဆိုင်ရာလိုင်းကို အထူးလေ့လာဖြင့် ဘလက်ဟိုး(လ်) အပါအ၀င် အခြားသော (Hawking Radiation) စသည့် ဖော်ပြချက်များဖြင့် နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ သူသည် အတော်အသင့် အတိုင်းအတာအထိတော့ အိုင်းစတိုင်းနောက်ကို လိုက်သည်။ အတော်အသင့် အတိုင်းအတာအထိတော့ အိုင်းစတိုင်းကို ဝေဖန်သည်။ အိုင်းစတိုင်းနောက် … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged စတီဖင်ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ အသိပညာ၊ ဒဿနပညာမှ သိပ္ပံသို့၊ သိပ္ပံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ (The Objective Character from Philosophy to Science, from scientific knowledge to Buddhism.) ဒဿနပညာ၌ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျခြင်း ဟူသော စကားလုံးအား အထူးလေ့လာ ဆင်ခြင်ကြသည်။ (Objectivity of History) ဟူသော သမိုင်းဆိုင်ရာ ဒဿနပညာ၌ သမိုင်းအမြင်တို့၏ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျနိုင်မှု၊ မကျနိုင်မှုတို့ကို စိစစ် ဝေဖန်ကြသည်။ သမိုင်းအား သမိုင်းရေးသူ ပြောချင်သလိုပြော၍ မဖြစ်နိုင်၊ … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Buddhism, Science	| Leaveacomment
Posted on December 12, 2013 by chitnge
မှန်တာကို အားပေးကြပါ ယောဂီများ အမှန်သစ္စာက အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လောကုတ္တရာနယ်မှာ လိုက်စားရင် အမှန်သစ္စာက အဓိကကျတယ်။ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတာက အဓိက မကျပါဘူး။ အတင်းပြောနိုင်တဲ့သူ အောင်မြင်စတမ်း ဆိုတာကတော့ လောကုတ္တရာမှာ မရှိသင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အခုတော့ ဦးအောင် အတင်းပြောနိုင်တဲ့ သူတွေက ဟိတ်ကြီး ဟန်ကြီးနဲ့ အောင်မြင်ကြစတမ်းဆိုတဲ့ ကိန်းခန်းကို ရောက်နေတယ်။ ဒါကတော့ ကိန်းခန်းကြီး မှားနေတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ အမှန်သစ္စာက အရေးကြီးပါတယ်။ စာရေးသူဟာ ကျင့်ခဲ့တယ်၊ ကျင့်ခဲ့တာဟာ ကျင့်ခဲ့တာပေါ့။ … Continue reading →
အမှန်တရားကို မသွေဖီရလေအောင် —
အမှန်တရားကို မသွေဖီရလေအောင် — ခရိုနီတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်က ဘာကိုမှ ငတ်မပြနဲ့။ ပရိတ်သတ်များ ခရိုနီတွေက စောင့်နေတယ် ဘယ်သူဟာ ဘာငတ်သလဲလို့ ငတ်ရင် အဲဒီ ငတ်တဲ့ဟာလေး ကြွေးပြီးတော့ သူတို့က အသုံးချတာ။ တော်တော်များများဟာ အသုံးချ ခံရပြီ၊ အခုစာရေးသူ ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်တောင် နောက်ကျသွားပြီ၊ ပြည်သူလူထုဘက်က ကာကွယ်ရင်းနဲ့ကို နောက်ကျသွားပြီ၊ ခရိုနီတွေက Tags: Myanmar Posts
ရဟန္တာဆိုတာ ရဟန္တာဆိုတာ သံသရာလည်စေတတ်တဲ့ ဓာတ်တွေကို အပြီးအပိုင် သတ်နိုင်တော်မူတဲ့ အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ပိုင်ရှင်များကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယောဂီများက ရဟန္တာကို စိတ်ဝင်စားတော့ ရဟန္တာဆိုတာ အဲဒီ အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်။ သံသရာလည်စေတတ်တဲ့ ဓာတ်ကို အပြီးအပိုင် မသတ်နိုင်ရင်တော့ သံသရာလည်ရတာပေါ့။ သံသရာ လည်ရရင်တော့ နောက်ဘ၀တွေလည်း ရှိသလို ရဟန္တာလည်း မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ နောက်ဘ၀ မရှိတော့ဘူး၊ ဒီဘ၀မှာ အသက်ရှင်လျှက် ရှိရင်တော့ … Continue reading →